Watch live match streaming Pakistan vs Zimbabwe on PTV Sports
Live Streaming Cricket Match PAKISTAN VS ZIMBABWE 5 October 2015
Watch live match streaming Pakistan vs Zimbabwe online Cricket match streaming on PTV Sports live TV channel on this page. We are sharing you online 3rd ODI live match Pakistan vs Zimbabwe on 5th October 2015.
In first and second ODI pakistan cricket team played very well and unfortunately Pakistan cricket team could not win 2nd ODI against Zimbabwe at Harare Cricket stadium. Shoaib Malik performed very well in 2nd ODI and scored 96 runs against Zimbabwe. Click the links given below to get online Score, online commentary , audio commentary of live cricket match pakistan vs Zimbabwe on this page.
live match streaming Pakistan vs Zimbabwe
Pakistan has dominant position against Zimbabwe. Pakistan cricket team is leading against Zimbabwe by Azhar Ali who is very talented batsman and come to play in opening. While Zimbabwe Team also looking for to win this match. they are in good spirit and say that in 2nd ODI Zimbabwe team played very well and win last ODI that encouraged players and motivated them to win 3rd ODI.
Team Squads Pakistan vs Zimbabwe:
E Chigumbura*, BB Chari, CJ Chibhabha, AG Cremer, LM Jongwe, N Madziva, H Masakadza, CT Mutombodzi, R Mutumbami†, T Muzarabani, J Nyumbu, T Panyangara, Sikandar Raza, MN Waller, SC Williams
Azhar Ali*, Aamer Yamin, Ahmed Shehzad, Asad Shafiq, Babar Azam, Bilal Asif, Imad Wasim, Mohammad Hafeez, Mohammad Irfan, Mohammad Rizwan†, Rahat Ali, Sarfraz Ahmed†, Shoaib Malik, Sohaib Maqsood, Wahab Riaz, Yasir Shah
Previous PostAllama Iqbal Son Javed Iqbal Passed away	Next PostHEC to Launch Country School on Internet Governance	Popular